Resaky ny mpitsimpona akotry : olana in-droa miantaona | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : olana in-droa miantaona
Par Les Nouvelles sur 04/07/2016
Tsapa teo amin’ny fanambarana nataon’ny Filohampirenena ny fahadisom-panantenan’ny fitondrana tao aorianan’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Antenimieram-pirenena momban’ny fanemorana ny fandinihana sy fandanina an’ilay volavolan-dàlana mifehy ny tontolon’ny fitaterana vaovao sy ny fanaparihana hevitra. Voalaza fa sikidy mila voatsiary ny hetsika nasehon’ireo sokajin’olona ao anatin’ny sehatry ny serasera na ny mpanao gazety izany na ny fikambanan’ny tompon’orinasa.
Tsotra ihany anefa ny antony miteraka olana. Ny mpanao serasera dia mitaky ny fanalana ny fanagadrana ao anatin’ny fomba fanasazina ny heloka eo amin’ny asa fitateram-baovao sy fanapariahan-kevitra. Raha dinihana ambony ihany izany dia hoatran’ny tsy rariny, ny fanaovana an’izany asa izany ve dia afaka atao antony hanomezana sata manokana fiarovana ho tsy maty manota.
Diso izay fametrahana ny antony ny olana izay. Raha fanapariahana lainga fanosoram-potaka na an-gazety na amina fomba hafa dia efa heloka fehezin’ny làlana iombonana (droit commun), toy izany koa ny fanompana sy ny fanevatevana na mahakasika olon-tsotra na mahakasika an’ireo manan-kaja ambony.
Eo amin’ny fitaterana tranga sy fanao maramara na maloto izay manalabaraka no mipetraka ny olana. Lasa mivadika ny resaka, satria ve makasika olona ambony na andry sy sampam-panjakana ka mety anoso-potaka azy ireo ilay tranga sy fanao dia tsy azo resahana ? Tsy ho lasa fiarovana tsy ho maty manota ho azy ireo ve izany fifehezana izany ? Raharaham-pirenena sy fanatanterahana adidy ho an’ny vahoaka no kirakirain’izy ireo, ka raha iny misy mivilana na ny efa na ny fihetsika eo am-panatotosana an’izany tsy maika ve ho tokony abaribary ho fantatry ny rehetra toy izay hoe tsy azo resahana fa tsy maintsy kobonina ! Dia atao fahotana mahafaty mendrika fanagadrana ny fampahalalana an’izany ho an’ny vahoaka.
Mety hitera-doza ny fifehezana ny mpitatitra vaovao tsy hamboraka sokajim-baovao izay na marina aza mety handoto ny mpitondra sy ny sampana miankina aminy. Moa ve tsy azo ho heverina fa ny tontolon’ny fitanteram-baovao indray no mpiray tsikomba amin’ny fanaovana maloto ? Ny fitaterana ny tranga misy no adidiny, fa tsy ny fifantenana vaovao ka hifehy tena hanafoana amina fahanginana satria mahamenatra ny fitondram-panjakana ilay zava-misy.
Naman’ny fanampenam-bava no fonosin’ny andinin’
ilay volavolan-dalàna miteraka olana : mietrin’ny sehatrin’
ny fahalalahana, atao ho tompon-trano mihono ny vahoaka.